Websaydhka Apple TV + dib ayaa loo qaabeeyey | Waxaan ka socdaa mac
Markii ay Apple soo saartay Apple TV +, bogga lagu adeegsan karo adeeggan iyo halka lagu soo bandhigay dhammaan macluumaadka ku saabsan taxanaha ay ku jirtay, waxaa lagu muujiyey qaabka qayb ahaan, Naqshad aad u dhib badan in la arko iyo in muddo kadib ay joogsatay macno iyada oo Apple ay kordhisay tirada xulashooyinka la heli karo.
Apple ayaa dib u habayn ku sameeyay qaabeynta degelkan tusida naqshad aad ula mid ah mida aan ka heli karno arjiga TV-ga ee laga heli karo Apple TV, naqshad aad u cad, fudud oo dareen badan taas oo kuu ogolaaneysa inaad si jaleec ah uga hesho waxa ugub ah waxyaabaha cusub ee horeyba looga heli jiray adeegga fiidiyowga. ku jira socodka Apple.
La Websaydhka Apple Waxay ku habboon tahay in lagu cuno waxyaabaha laga heli karo barnaamijka Apple shaashad ka weyn kan iPad ama iPhone, haddii aynaan haysan Apple TV-geena. Sidoo kale waa ikhtiyaar aad u fiican oo loogu talagalay dadka isticmaala aaladaha aan loo casriyeynin macOS Catalina, nooca macOS oo asal ahaan ka mid ahaa barnaamijka Apple TV.
Naqshad aasaasi ah oo lagu soo bandhigay bogga Apple TV + waxay ku habboonayn tufaax (Ma soo qaadan doono mowduuca Ive), oo leh liis garaacaya oo ka maqan nooc kasta oo urur ah, sidaa darteed adeegsadayaashu si dhakhso ah uma heli karaan cutubyada ama filimada cusub ee Apple ay ku dartay adeeggan.
Waxaan rajeyneynaa cusbooneysiinta mustaqbalka, Apple iKu dar waxyaabo cusub sida inaan sii wadno daawashada dhacdadii aan ku sii jirnay, badhanka xiga markaan daawaneyno taxane ama xitaa baar baaris si dhakhso leh loogu helo waxa aan raadineyno adigoon marin bogga internetka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Websaydhka Apple TV + gabi ahaanba waa la dayactiray
Addoon xilli 2 qayb 1 hadda la heli karo